YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, August 11
11 August 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://www.mediafire.com/file/1ajg5uz9zfsgq8w/11 August 2010 yeyintnge's Diary.doc
11 August 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/11/20100အကြံပြုခြင်း
အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် ရွှေ့ ပြောင်း အခြေချသည့် ကရင် ဒုက္ခသည် တစ်ဦး သေနတ် ဖြင့်ပစ်သတ်ခံရ
သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရသည့် ကရင်လူငယ် ဖွာလီးကလို
အမေရိကန် နိုင်ငံ ဂျော်ဂျီယာ ပြည်နယ် ရှိ ကလပ်စတန် မြို့ တွင် ရွှေ့ ပြောင်း အခြေစိုက်သည့် ကရင်လူမျိုး အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ ဒုက္ခသည် တစ်ဦးမှာ သြဂုတ်လ ၆ရက် သောကြာနေ့ ည က အာဖရိက နွယ်ဖွားဟု ယူဆရသည့် လူသုံးဦးက သေနတ် ဖြင့် ပစ်သတ်သွား သည် ဟု စုံစမ်း သိရှိရသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက မဲလဒုက္ခသည် စခန်း ရှိ ဇုန် အမှတ် C မှ နေ၍ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် သို့ ပြောင်းရွှေ့ အခြေစိုက် သည့် လူငယ် တစ်ဦး ဖြစ်သူ မောင်ဖွားလီးကလို မှာ သူနေထိုင်ရာ ကလပ်စတန် မြို့ ရှိဝင်ဒိုဘိခ်ျ အိမ်ခန်းများ မှ နေ၍ ည ၉နာရီ ခွဲ ခန့် တွင် အမှိုက်ထွက် ပစ်ရာ မော်တော်ကား အဖြူရောင်ပေါ်မှအာဖရိက နွယ်ဖွား သုံးဦး က ဆင်း လာပြီး တစ်ဦးက သေနတ် ဖြင့် သူ့ အား တေ့ကာပစ်ခတ် သွားသောကြောင့် နေရာတွင် ပင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားသည်။
ခင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူမြန်မာအမျိုးသားတစ်ဦးကFreedomNewsGroupသို့ပြောသည်။ကလပ်စတန်ရဲတပ်ဖွဲ့သည်ယခုအချိန်ထိပစ်သတ်သွား သည့်တရားခံများအားဖမ်းဆီးရနိုင်ခြင်းမရှိသေးဟုသူကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်သည်အာဖရိကန်အမေရိကန်များနှင့်အာဖရိကတိုက်မှ ရွှေ့ပြောင်းအခြေစိုက်လာသည့်ဒုက္ခသည်အများစုနေထိုင်ရာဖြစ်သည်။မြန်မာဒုက္ခသည်အများစုမှာလည်းအင်ဒီယားနားပြည်နယ်ဖို့ဝိန်းမြို့ပြီးလျှင်ကလပ်စတန် တွင်အများဆုံးအခြေစိုက်ကြသည်။၂၀၀၈ခုနှစ်စာရင်းဇယားများအရကလပ်စတန်တွင်မြန်မာဒုက္ခသည်အယောက်တစ်ထောင်ကျော်အခြေစိုက်သည်ဟုသိသည်။
လူမည်း များ ကြီးစိုး သည် ကလပ်စတန် တွင် နယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်း များမှ ရွှေ့ ပြောင်း အခြေစိုက်သည့်
ကရင် ဒုက္ခသည် လူငယ်များ နှင့် လူမည်း လူငယ်များ မှာ Apartment အားကစားကွင်းများ တွင် ကစားရာမှ
ပြဿနာ ဖြစ်ကြပြီး လူမည်းများမှာ ကရင် ဒုက္ခသည် လူငယ်များ ကို ရန်ပြုမှု များ ရှိသည် ဟု သိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် သီတင်း နှစ်ပတ် ကျော်ကလည်း ကစားတွင်း အချင်းများ ရာမှ လူမည်း ငါးဦးက ကရင် ဒုက္ခသည်
လူငယ် တစ်ဦး ကို ဖမ်းချုပ်ပြီး မျက်နှာ နှင့် ခန္တာ ကိုယ် တစ်ဝိုက် ကို အချက်ပေါင်းများ စွာ ထိုးကြိတ် ကန်ကျောက်သည် ဟု သိရှိရသည်။ ကလပ်စတန် မြို့ ရှိ လူမည်း များမှာ ကရင်ဒုက္ခသည် များ ၏ စက်ဘီး
များ ခိုးယူခြင်း ၊ လုယက်ခြင်း ၊အလစ် သုတ်ခြင်း တို့ ကို ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
ဖွားလီး ကလို ၏ သည် ကလပ်စတန် ရှိ ကြက်သား စက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်နေပြီး ယခု ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင်
ကျောင်းပြန်တက်ရန် စီစဉ်နေ ချိန်တွင် အသတ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ဖွားလီး ကလို သည် ကလပ်စတန် တွင်
အကို နှင့် အတူ နေထိုင်ပြီး မိဘ နှစ်ပါးမှ မဲလ ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် ပင် ရှိနေသေးသည် ဟု သိရသည်။
သေဆုံးသူ သည် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် ဖြစ်သောကြောင့် ကလပ်စတန် ရှိ ခရစ်ယာန် သာသနာပြု
အဖွဲ့ တစ်ခု မှ တာဝန်ယူမည် ဟု သိရသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် ပြောင်းရွှေ့ အခြေစိုက်သည့် ကရင် လူငယ် မျိုးများ မှာ နယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်း
များမှ ထွက်ခွာ လာသော် လည်း ရေသစ်၊မြေသစ် ဖြစ် သည့် အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် ဒုက္ခမျိုးစုံ နှင့် ရင်ဆိုင်
ရသည်။ ပြောင်းရွှေ့ အခြေစိုက်လာ သည့် ဒုက္ခသည်များ အား ပြန်လည် နေရာချထား ပေးသည့် (Resettlement Agency ) နှင့် ထို အဖွဲ့ စည်းများ မှာ အကူအညီ ပေးရေး ၀န်ထမ်း (Case Worker) များ ရှိသော် လည်း ထိုသူများက ထိထိရောက် ရောက် ကူညီ ခြင်း မရှိသော ကြောင့် မလိုလား အပ်သည့် လူမှု ဒုက္ခများ နှင့် ကြုံတွေ့ ရသည်ဟု ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် ဂရင်းလိ မြို့ မှ ကရင် အမျိုး သမီး တစ်ဦး ဖြစ်သူ နော်ဖောဆာ က ပြောသည်။
သူက “သူတို့အကူအညီ ပေးတယ် ဆိုပြီး ပြည်နယ် အစိုးရ တွေ ဆီက နေ Grant (ထောက်ပံ့မှု အတွက်ချထားငွေ)
ယူကြတယ် ပြီးတော့ ရောက်လာတဲ့ လူသစ် တွေ က ဘတ်(စ)ကား မစီတတ် လို့ဖုန်းဆက်မေးရင်တောင် ဖုန်း
မကိုင် ကြဘူး အဲဒါ ဒီက Case Worker တွေ ပဲ ဟု သူက ထပ်လောင်းပြောသည်။
Immediate Release 11th August 2010
Inagroundbreaking report in March this year, the Special Rapporteur on Burma stated that the ‘gross and systematic’ nature of the abuses and the lack of action to stop them indicated; ‘a state policy that involves authorities in the executive, military and judiciary at all levels.’ He also stated; ‘According to consistent reports, the possibility exists that some of these human rights violations may entail categories of crimes against humanity or war crimes under the terms of the Statute of the International Criminal Court.’ ... ‘UN institutions may consider the possibility to establishacommission of inquiry withaspecific fact finding mandate to address the question of international crimes.’
Seventy-three Canadian MPs and Senators (see the list at: http://www.cfob.org/news/PFOBandCFOBurgeGovToSupportCoIonBurma.html) have called on the government to support an Inquiry. More than three thousand people have emailed the Canadian government in the past week alone, also calling on Canada to support an inquiry.
ဧရာဝတီ e- ဂျာနယ် ( August ) vol2.no15
Irrawaddy E Journal v2n15
Classical Truth._ Final_ Doc
‘Russia trained 4,185 Myanmar nuclear officers’
Bangkok, Aug6– Russia has trained 4,185 Myanmar military officers in nuclear sciences over the past decade but onlya’sprinkling’ of scholars have pursued the positive uses of the energy source,aMyanmar academic said Friday.
Myanmar’s nuclear ambitions have beenasubject of concern in recent years after allegations by defectors that the pariah regime is keen to develop nuclear weapons in cooperation with North Korea.
Myanmar’s ruling junta, however, claims that its nuclear ambitions are purely medical in nature.
Maung Zarni,aresearch fellow at the London School of Economics and Political Science, pointed out that onlyahandful of the Myanmar graduates who have studied nuclear-related technologies in Moscow had medical backgrounds, raising questions about the regime’s claims of pursuing nuclear energy for medicinal reasons.
‘Between 400 to 600 graduates are sent to Russia every year and out of those graduates onlyasprinkling of officers have medical backgrounds,’ he toldaseminar at Bangkok’s Chulalongkorn University.
Zarni estimated that only five to 20 of the military graduates attending nuclear-related courses in Moscow since 2001 had medical backgrounds. He had compiled the list of 4,185 based on interviews with former graduates, he said.
‘And if the nuclear programme is for medical purposes why isn’t there any involvement by the Ministry of Health,’ Zarni noted.
He acknowledged that it was still difficult to prove whether Myanmar’s military junta had acquired or developed nuclear weapons, but argued their intent to do so was pretty clear.
At this stage the junta might be more interested in using the threat ofapotential nuclear arsenal asa‘big stick’ in diplomacy, he speculated.
‘The fact that the US and other powers have not done anything substantive to rein in North Korea is because they have the bomb, so that’sarole model foralot of rogue states,’ Zarni said.
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ဒု ဥက္ကဋ္ဌ စော ဒေးဗစ် တာကပေါရဲ့ အမြင်
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း
100806 Phyoe Min Thein
ဗိုလ်သန်းရွှေအိန္ဒိယခရီး၊ဗကပ ရဲ့  မှတ်ချက်
အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် ရွှေ့ ပြောင်း အခြေချသည့် ကရင် ...
Canada Under Increased Pressure To Support UN Inqu...
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ဒု ဥက္ကဋ္ဌ စော ဒေးဗစ် တာကပေါ...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ ဦးဖြိုးမင်းသ...